दिनमा कति पानी पिउनु राम्रो हो ??? « Dhankuta Khabar
दिनमा कति पानी पिउनु राम्रो हो ???
प्रकाशित मिति : Apr 22, 2019
‘धेरै पानी पिउनु पर्दछ, हरेक दिन ८ गिलास वा दुई लिटर पानी पिउनु पर्दछ’ यस्ता भनाई खुब सुनिने गर्दछन्। ‘पानी जीवन हो।’ पानी मानव शरिरका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ, त्यसकारण धेरै भन्दा धेरै पानी पिउनु अति आवश्यक छ।
तर, पानीलाई लिएर यस्ता कुराहरु पहिलादेखि भने थिएनन्। १९ औँ शताब्दी शुरु हुनु भन्न्दा अगाडि पानी पिउनु नराम्रो मान्ने गरिन्थ्यो। धनी मानिसहरु पानी पिउनु आफ्नो कमजोरी सोच्ने गर्थे। किनकी गरिबहरुले पानी पिएर आफ्नो पेट भर्ने गर्छन् भन्ने धनी मानिसहरुलाई लाग्थ्यो। त्यसैले पानी पिउनु उनीहरुको मान मयार्दाको खिलाप थियो।
तर, पछिल्लो समय ब्रिटेनमा मानिसहरु धेरै पानी पिउने गर्छन्। त्यसैगरी, अमेरिकामा अन्य पेय पदार्थ भन्दा पनि धेरै बोतलको पानीको माग बढिरहेको छ। अन्य देशहरु सँगसँगै भारतमा पनि मानिसहरुले धेरै पानी पिउन थालेका छन्।
मानिसहरुले पानी धेरै नपिउन पनि किन, दिन रात उनीहरुलाई धेरै पानी पिउने सल्लाह दिइन्छ। जति धेरै पानी पियो त्यति धेरै स्वस्थ हुनुका साथै चम्किलो छाला हुने गर्छ भन्ने गरिन्छ। यति मात्र नभएर धेरै पानी पिउनाले माटोपना कम गर्न सकिन्छ भन्ने भनाई पनि छ।
यति मात्र कहाँ हो ररु लण्डनमा मेट्रोमा हिँड्ने मानिसलाई पानी साथमा लिएर हिँड्न सल्लाह दिने गरिन्छ। त्यसैगरी, ब्रिटेनमा धेरै स्कुलहरुमा अनिवार्य पानी चाहिने नियमहरु छन्।
मानिसहरु भन्ने गर्छन्, हरेक दिन ८ गिलास पानी पिउनु पर्छ। तर, हरेक दिन ८ गिलास पानी पिउनु पर्ने यस्तो नियम कहाँबाट आयोरु कसले ल्यायोरु कसले रिसर्च गर्यो भन्ने कुरा कसैले पनी पत्ता लगाउन सकेका छैनन्।
धेरै पानी पिउन मानिसहरु किन लागि परेका छन्। यसको राज दुई जना महावीरमा लुकेको छ। १९४५ मा अमेरिकाको फूड एण्ड बोर्ड नेशनल रिसर्च काउन्सिलले हरेक वृद्धलाई क्यालोरी पचाउनका लागि एक मिलिलिटर पानी पिउन सल्लाह दिएको थियो।
यसको मतलब २ हजार क्यालोरी लिने महिला वा पुरुषले एक दिनमा २ लिटर पानी पिउनु पर्दछ। जति धेरै क्यालोरी लियो त्यति धेरै पानी पिउन जरुरी हुन्छ।
जसमा सादा पानी मात्र नभएर फलफूल, तरकारी वा अन्य पेय पदार्थ पनि मिसाउन सकिन्छ। यो भन्दा पनि १९७४ मा मार्गरेट मैक्किलियम्स र फ्रेडरिक स्टेयरको किताब न्यूट्रिसन फर गुडमा सिफारिस गरिएको थियो, हरेक व्यक्तिले हरेक दिन ८ गिलास पानी पिउनु पर्छ।
यी दुई जना लेखकले भनेका छन्, ‘सादा पानी मात्र नभएर फलफूल, तरकारी मात्र नभएर पिउनका लागि बियर पनि सामिल गरिएको छ।’ तर कुनैले पनि भनेका छैनन् कि शरीरका लागि पानी अति जरुरी छ। मानव शरीरको दुई तिहाई भागमा पानी हुने गर्दछ। त्यसैको माध्यमबाट पोषण तत्व मिल्ने गर्दछ। पानीले शरीरमा भएका खराब तत्वलाई निकाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ।
मानिसको शरीरबाट पानी पासिना र पिसाबको माध्यबाट जाने गर्दछ। यसले गर्दा शरीरमा पानीको मात्रा सधँै रहिरहनु पर्दछ। मानिसको शरीरमा पानी कम हुनु हुँदैन, यदि शरीरमा पानी कम भयो भने डिहाइड्रेशन सम्भाबना हुने गर्दछ।
हरेक दिन ८ गिलास पानी पिउनु पर्ने भ्रम विश्वभर छ। वषौँदेखि चलिआएको यो सोच मानिसहरुमा हावी भइसकेको छ। जसका कारण त्यहि हिसावले मानिसहरु पानी पिउने गरेको पाइन्छ। तर जानकारहरुले मानव शरीरले पानी जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्र माग्ने बताएका छन्।
अमेरिकाको टफ्ट्स यूनिर्भसिटीका विशेषज्ञ इर्विन रोजेनबर्गले भन्ने गरेका छन्, ‘मानिसको शरीरले पानीलाई सन्तुलन राख्न हजारौँ वर्ष पहिल्यैबाट सिकेको थियो, जसको सुरुवात उहिल्यैबाट भएको थियो, जब समुन्द्रबाट जीवहरु जमिनमा बस्न थालेका थिए।’
कुनै पनि स्वस्थ शरीरका लागि पानीको जरुरत पर्ने गर्छ। मानिसलाई पानी प्यास लागेपछि दिमागले प्यास लागेको संकेत दिने गर्छ। दिमागको एक हर्मोनले जब पिसाब पहेलो आउन थाल्छ तब शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको संकेत दिने गर्दछ।
ब्रिटेनका डाक्टर र खेलाडीका सल्लाहकार कोर्टनी किप्सले भन्ने गरेका छन्,‘यदि तपाईँ आफ्नो शरीरको कुरा सुन्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन सक्छ, तपाईँलाई कति बेला प्यास लाग्छ।’
मानिसहरु प्यास लाग्ने बित्तिकै शरीरमा पानीको मात्र कम भएको भनेर सोच्नु गलत हो। किनकी वर्षौँदेखि मानिसहरु यहि सोचका साथ प्यास बुझाउने गरेको पाइन्छ। यसरी शरीरमा पानीको कमी भएको संकेत दिन्छ भन्नु वा सोच्नु नै गलत हो।
यसको सबै भन्दा राम्रो विकल्प भनेकै प्यास लागेपछि पानी पिउनु हो। यसमा कुनै क्यालोरी हुँदैन तर मानिसलाई प्यास लागेपछि चिया, कफि, चिसो वा अन्य पेय पदार्थ पिएर पनि प्यास मेट्न वा पानीको कमी पूरा गर्न सकिन्छ।
यस्ता पेय पदार्थहरुको ‘साइड इफेक्ट’ भएता पनि बेलायतमा गरिएका धेरै रिसर्चका अनुसार चिया कफीले शरिरमा पानीको मात्रा मिल्ने गर्दछ। यसैगरी रक्सी वा बियरबाट पनि शरीरले पानी पाउने गर्दछ।
कुनै पनि वैज्ञानिकलाई अहिलेसम्म कुनै यस्तो प्रमाण मिलेको छैन कि धेरै पानी पिउनु पर्दछ, पानी पिई रहनु पर्दछ भन्ने कुरा एकदमै सत्य होस् ।
धेरै पानी पिउनाले शरिरलाई कुनै नोक्सान गर्दैन र यसले डिहाईड्रेसन अथवा पानीको कमी हुनबाट बचाउने गर्दछ। जसले गर्दा दिमागलाई काम गर्न सजिलो बनाउने गर्दछ। मानिसहरु पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनका लागि रहेका चुनौतिको सामना गर्ने गरेको पाइन्छ।
नियमीत रुपमा पनी पिएर धेरै तौल भए घटाउन सकिन्छ। अमेरिकाको भर्जिनिया पोलिटेक्नीक इन्सिचिउट ब्रडा डेवी भन्छन्,‘कम पानी पिउने मानिसको तुलनामा बढी पानी पिउने मानिसको तौल चाडो घट्ने गर्दछ।’
यूनिर्भसिटी कलेज लण्डनले बारम्बार उही कुरा भन्ने गरेको पाइएको छ। मानिसले मिठो पिय पिउनु भन्दा सादा पानी पिउनु राम्रो मानिन्छ। जसले तौल कम गर्ने काम गर्दछ। यसैगरी शरीरमा कम क्यालोरी बनाउनका लागि सूप वा शर्वत पिउन पनी सकिन्छ।
एउटा भनाई पनि छ, धेरै पानी पिउनाले छाला चम्किलो र राम्रो हुन्छ तर वैज्ञानिकले अहिलेसम्म पनि यस बारे कुनै प्रकारको प्रमाण भेटाउन सकेका छैनन्।
जो मानिस एक दिनमा ८ गिलास पानी पिउँछ, उसलाई कुनै पनि प्रकारको नोक्सान हुँदैन तर हरेक पटक पानी पिई रहँदा कुनै न कुनै प्रकारको नोक्सान सायद हुन सक्छ। जसले गर्दा शरीरमा सोडियमको मात्रा कम हुने गर्दछ। सोडियमको मात्र कम हुनाले दिमाग र किड्नी सुनिने समस्या देखिने गर्छ।
डाक्टर कोर्टनी किप्सले भन्ने गरेका छन्, ‘हामी शरीरले गरेको संकेतलाई प्रवाह गर्दैनौँ र पानी पिउने गछौँ, जसले गर्दा केही न केही असर गर्न सक्छ।’
जोहाना पैकेनहैम ब्रिटेनकी एथलेटिक खेलाडिले २०१८ मा लण्डनमा म्याराथनमा भाग लगेकी थिईन।
उनले त्यो समयमा धेरै गर्मीका कारण धेरै पानी थिएकी थिइन्। दौड सकिएपछि पनि उनले धेरै पानी पिइन्, तर उनी पानी धेरै पिउनाले बेहास भएका कारण एअर एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल पुर्याउनु परेको थियो। उनी दुई दिनसम्म बेहोस भएकी थिइन्।
जोहानले आफ्ना हरेक साथीले दौडको समयमा सके भन्दा धेरै पानी पिई रहनु भनेर सल्लाह दिएको बताइन्। उनले अन्य मानिसलाई धेरै पानी नपिउन सल्लाह दिने गरेकी छिन्। धेरै पानी पिउँने सल्लाह दिने भएका कारण मानिसहरु जहाँ पनि जान्छन्, पानी साथमै लिएर जाने गर्दछन्।
लण्डनका एक्सपर्ट ह्यू मान्टगोमरीले भन्ने भरेका छन्,‘एकदमै धेरै गर्मीमा बस्ने मानिसले दिनभरमा दुई लिटर पानी पिउन जरुरी हुन्छ, आधा घण्टाको बाटो हिँडेर पसिनाले निथु्रक्क भएपनि बोतलमा पानी बोकेर हिँडिरहन जरुरी हुँदैन।’
तर मानिसले यो जान्न पनि अत्यन्तै जरुरी छ की ६० वर्ष पार गरिसकेपछि प्यास महसुस गर्ने शक्ति कम हुने गर्दछ। यस्तो समयमा डिहाईडे«सन हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले वृद्धा अवस्थामा पानी पिउने कुरामा एकदमै धेरै ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। त्यसैले आफ्ना आफन्तले पानी कति पिइरहेका छन् भनेर ध्यान राख्नु पर्दछ।
हरेक मानिसलाई पानीको जरुरत फरक–फरक हुन्छ। त्यसकारण हरेक दिन ८ गिलास पानी पिउनु पर्ने सुत्र सबैमा लागु हुँदैन। जब जरुरत पर्छ, तब पानी पिउँदा हुन्छ।
धेरै पानी पिउँदा मानिस बारबार ट्वाइलेट जाने गर्छन् जसले गर्दा केही क्यालोरी कम गर्न सकिन्छ धेरै पानी पिउँनुको यही एक फाइदा हुन सक्छ।
देश शञ्चारको सहयोगमा